Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (I) | Ngivela kwa-mac
Ku-iOS 10, uhlelo lokusebenza lweMilayezo lithole isici seDigital Touch, isici sokuxhumana esasikade sinqunyelwe ku-watchOS. Nge-Digital Touch, ungathumela imidwebo, ukushaya kwenhliziyo, ama-fireball, ukuqabula, nokuningi kubangani bakho nomndeni wakho, konke ngokuthepha okumbalwa.
Ngokwengeziwe, imidwebo, ukushaya kwenhliziyo, ukuqabula, neminye imiyalezo eyenziwe nge-Digital Touch ku-iPhone nayo ingabukwa ku-Apple Watch, futhi ngokufanayo. Lokhu kwandisa izindlela esingazichaza ngazo. Ake sibone ukuthi isebenza kanjani.
1 Ukufinyelela ku-Digital Touch
3 Chaza kuzithombe namavidiyo
Ukufinyelela ku-Digital Touch
Vula uhlelo lokusebenza lwemilayezo ku-iPhone yakho.
Vula ingxoxo ekhona noma qala entsha.
Thinta isithonjana esikhonjwe ngeminwe emibili enhliziyweni.
Chofoza umcibisholo ongakwesokudla ukuze unwebise iwindi le-Digital Touch.
Ungathumela umbhalo nemidwebo usebenzisa isikhombimsebenzisi esincane esishintsha ikhibhodi, kepha manje usunesikhala esithe xaxa, sonke isikrini se-iPhone.
I-Digital Touch interface isekela ukuthinta okususelwa kokuthinta okuhlukahlukene, ungadweba noma ubhale usebenzisa umunwe futhi umake namavidiyo amafushane nethuluzi levidiyo elifakiwe.
Ukudweba ngesici seDigital Touch, vele uqale ukudweba ebhokisini elimnyama, kubonakale kumodi yokubuka ejwayelekile nemodi yesikrini esigcwele. Uma usebenzisa ukubuka okujwayelekile, thepha kumbuthano omncane ohlangothini lwesobunxele kwesikrini ukuze ubone izinketho zombala ezahlukahlukene. Kwimodi yesikrini esigcwele, imibala iyatholakala phezulu.
ICEBISO: ku finyelela imibala yangokwezifiso, yenza umshini omude kunoma yimaphi amasampula ombala. Isondo lemibala lizovuleka ngezinketho zombala wangokwezifiso ukwenza imidwebo yakho ihluke.
Ku-Apple Watch, imidwebo ye-Digital Touch ithunyelwa ngokushesha nje lapho ususa umunwe wakho esikrinini imizuzwana embalwa, kepha ku-iPhone naku-iPad, ungathatha isikhathi sakho ngoba imidwebo ayithunyelwa uze uthephe umcibisholo wokuhambisa.
Umuntu owamukela umdwebo wakho owenziwe nge-Digital Touch uzowubona sengathi uwenza ngesikhathi sangempela, njengoba nje wenze. Kufana nevidiyo ekhombisa inqubo oyilandele ukuqedela umdwebo wakho.
Futhi lapho uthola umdwebo owenziwe nge-Digital Touch ngemilayezo, chofoza kuwo futhi uzokwazi ukuwubona kusikrini esigcwele.
Chaza kuzithombe namavidiyo
Isici esiyingqayizivele se-Digital Touch ku-iPhone naku-iPad yikhono lokwenza thatha izithombe noma urekhode amavidiyo amafushane wesekhondi eli-10 angachazwa usebenzisa amathuluzi atholakalayo. Nakhu ukuthi ukwenza kanjani:
Ku-interface ye-Digital Touch, chofoza kusithonjana sekhamera.
Khetha ikhamera yangaphambili noma ikhamera esemuva enkulu ngokuthepha isithonjana sekhamera esincane ngezansi kwesokudla kwesikrini. Ikhamera engaphambili iyona ekhethwe kusengaphambili.
Cindezela inkinobho ebomvu ukuqala ukurekhoda. Ngenkathi ividiyo iqoshwa, ungasebenzisa amathuluzi we-Digital Touch ukudweba owabona phezulu.
Ngenye indlela, uma ufuna ukudweba esibukweni ngaphambi kokuba uqale ukurekhoda, vele uqale ukudweba ngomunwe owodwa. Uma usuqedile, cindezela inkinobho yokuqala yokurekhoda bese ividiyo izorekhodwa ngomdwebo ongenhla kwayo.
Ukuthatha isithombe, cindezela inkinobho emhlophe kunenkinobho ebomvu. Ngemuva kwalokho ungaqala ukudweba nokubhala izichasiselo sengathi yividiyo. Uhlelo lufana ncamashi.
Ngaphezu kokudweba ezithombeni nakumavidiyo, ungasebenzisa nokuthinta komzimba ukwengeza ukushaya kwenhliziyo, ukuqabula, nokuningi.
Cindezela umcibisholo oluhlaza okwesibhakabhaka ukuthumela isithombe noma ividiyo uma usuqedile.
Njengoba ukwazi ukubona, umsebenzi we-Digital Touch unikeza ukudlala okuningi ezingxoxweni zethu kuhlelo lokusebenza lweMilayezo evuselelwe le-iOS 10. Kepha kusekuningi kakhulu, ngakho-ke ungaphuthelwa yingxenye yesibili yalokhu okuthunyelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (I)